Services - Yino Yepasi Pose Co., Ltd.
International Trade Mart (Ruwa 1)
International Trade Mart (Ruwa 2)
International Trade Mart (Ruwa 3)
International Trade Mart (Ruwa 4)
International Trade Mart (Ruwa 5)
Runako & zvigadzirwa
Mazuva ese zvigadzirwa zvigadzirwa
Epidemic kudzivirira zvigadzirwa
handcrafts & zvipo
Hardware & zvishandiso
mitambo & zororo
Kuunganidza Ruzivo & Kutungamira kweMusika
takaunganidza mhando dzakasiyana dzeruzivo rwevatengesi. Uye isu tine zvinhu zvehunyanzvi vanotaura mutauro wakatsetseka wenyika yako vanogona kukutungamira mumusika.
Vashandi vedu vekutenga zvinhu vachakupa ruzivo rwakakosha munguva pfupi inosanganisira mutengo weEXW kubva kumutengesi, MOQ, dhizaini, nguva yekuendesa, kutonga kwehunhu, zvigadzirwa, kubvumidzwa kwetsika nezvimwe.
Zvezvigadzirwa zvakagadzirwa, tinogona kupa sampuli kwauri kuti usimbise. Uye isu zvakare tinoteerera kune emusika maitiro uye tinopa mharidzo nyowani kwauri.
Wedu mutengi mutengi anoziva musika mushe achakutungamira mumusika. Kuenzanisa mhando nemutengo, kusarudza vatengesi zviri nyore uye nekukurumidza, uye chengetedza yako yakakosha nguva.
isu tinonyatsoteedzera sampuro kuti tiongorore zvinhu.Kana iwe ukatenga zvigadzirwa zvehunyanzvi semuchina isu tinowana imwe yehunyanzvi zvinhu kubva munzvimbo ino kuita QC. Uye ndokupa iwe ongororo yekuongorora.Kana mushure mekusimbiswa kwako ndipo patinotanga kuita maitiro ekutakura.
Order Kuteedzera kumusoro
Kamuri 70298, 5th pasi, Musika wepasi rose wekutengesa musika distric 5, Yiwu Guta, Zhejiang, China.
Mhando dzeFace Shield
denda rekudzivirira zvigadzirwa
Matipi ekuisa emhizha epamba
Maitiro ekugadzirisa sei goridhe yakashongedzwa nezvishongo?